Iyo 30 inomhanyisa WordPress madingindira mu2021 [+ test data]
FR : https://www.hebergementwebs.com/site-internet/les-30-themes-wordpress-les-plus-rapides-en-2021-donnees-de-test
EN : https://www.hebergementwebs.com/website/the-30-fastest-wordpress-themes-in-2021-data-from
ES : https://www.hebergementwebs.com/sitio-de-internet/los-30-temas-de-wordpress-mas-rapidos-en-2021-datos-de
FI : https://www.hebergementwebs.com/verkkosivusto/30-nopeinta-wordpress-teemaa-vuonna-2021-testitietoja
HT : https://www.hebergementwebs.com/sit-entènèt/the-30-fastest-wordpress-themes-in-2021-test-data
FY : https://www.hebergementwebs.com/webside/de-30-rapste-wordpress-tema-s-yn-2021-test-gegevens
BG : https://www.hebergementwebs.com/уебсайт/30-те-най-бързи-теми-за-wordpress-през-2021-тест-данни
AM : https://www.hebergementwebs.com/ድህረገፅ/የ-30-ፈጣኑ-የ-wordpress-ጭብጦች-በ-2021-የሙከራ-መረጃ
GD : https://www.hebergementwebs.com/làrach-lìn/an-30-as-luaithe-wordpress-theme-in-2021-test-data
EL : https://www.hebergementwebs.com/δικτυακός-τόπος/τα-30-ταχύτερα-wordpress-θέματα-σε-2021-δοκιμή-δεδομένα
HE : https://www.hebergementwebs.com/אתר-אינטרנט/את-30-המהיר-וורדפרס-נושאים-בשנת-2021-נתוני-הבדיקה
EU : https://www.hebergementwebs.com/webgunea/the-30-azkarrena-wordpress-themes-2021-test-datuak
DA : https://www.hebergementwebs.com/internet-side/de-30-hurtigste-wordpress-temaer-i-2021-test-data
BE : https://www.hebergementwebs.com/вэб-сайт/30-самых-хуткіх-тэм-wordpress-тэстаў-у-2021-годзе
HA : https://www.hebergementwebs.com/gidan-yanar-gizo/-30-mafi-saurin-wordpress-jigogi-a-2021-gwajin-data
ID : https://www.hebergementwebs.com/situs-web/data-tes-30-wordpress-themes-tercepat-dalam-2021
CY : https://www.hebergementwebs.com/gwefan/y-30-cyflymaf-wordpress-themau-yn-2021-test-data
ET : https://www.hebergementwebs.com/veebisaidil/30-koige-kiiremini-wordpress-teemad-2021-test-andmed
CA : https://www.hebergementwebs.com/lloc-web/els-30-temes-de-wordpress-mes-rapids-de-2021-dades-de-prova
GU : https://www.hebergementwebs.com/વેબસાઇટ/-2021-ટેસ્ટ-ડેટા-30-ઝડપી-વર્ડપ્રેસ-થીમ્સ
HR : https://www.hebergementwebs.com/web-stranica/30-najbrzih-wordpress-tema-u-2021.-testnim-podacima
BS : https://www.hebergementwebs.com/web-stranica/30-najbrzih-wordpress-tema-u-2021-testnim-podacima
HU : https://www.hebergementwebs.com/weboldal/a-30-leggyorsabb-wordpress-themes-2021-teszt-adat
EO : https://www.hebergementwebs.com/retejo/la-30-plej-rapidaj-wordpress-temoj-en-2021-test-datumoj
AF : https://www.hebergementwebs.com/webwerf/die-30-vinnigste-wordpress-temas-in-2021-toetsdata
BN : https://www.hebergementwebs.com/ওয়েবসাইট/-2021-পরীক্ষা-ডেটা-তে-30-দ্রুততম-ওয়ার্ডপ্রেস-থিমগুলি
CO : https://www.hebergementwebs.com/situ-web/i-30-piu-veloci-wordpress-temi-in-2021-test-data
GL : https://www.hebergementwebs.com/páxina-web/os-30-temas-mais-rapidos-de-wordpress-en-2021-datos-de-proba
CS : https://www.hebergementwebs.com/webová-stránka/30-nejrychlejsich-wordpress-temat-v-2021-testovacich-datech
AR : https://www.hebergementwebs.com/موقع-انترنت/30-أسرع-وورد-ثيمات-في-2021-بيانات-الاختبار
FA : https://www.hebergementwebs.com/سایت-اینترنتی/-30-سریعترین-تم-وردپرس-در-داده-تست-2021
AZ : https://www.hebergementwebs.com/veb-sayt/2021-ci-ildə-ən-surətli-wordpress-temalari-30,-test-məlumatlari
IT : https://www.hebergementwebs.com/sito-web/i-30-temi-di-test-wordpress-piu-veloci-nel-2021-dati
NL : https://www.hebergementwebs.com/website/de-30-snelste-wordpress-thema-s-in-2021-testgegevens
RU : https://www.hebergementwebs.com/Веб-сайт/тестовые-данные-30-самых-быстрых-тем-wordpress-в-2021-году
PL : https://www.hebergementwebs.com/stronie-internetowej/30-najszybszych-motywow-wordpress-w-2021-danych-testowych
PT : https://www.hebergementwebs.com/local-na-rede-internet/the-30-mais-rapido-wordpress-themes-in-2021-test-data
NO : https://www.hebergementwebs.com/nettsted/de-30-raskeste-wordpress-temaene-i-2021-testdata
MT : https://www.hebergementwebs.com/websajt/it-30-l-iktar-mghaggla-wordpress-temi-fl-2021-test-data
LB : https://www.hebergementwebs.com/websäit/dei-30-schnellsten-wordpress-themen-an-2021-test-daten
LV : https://www.hebergementwebs.com/vietne/the-30-fastest-wordpress-themes-in-2021-test-data
RO : https://www.hebergementwebs.com/site-ul-web/cele-30-rapide-teme-wordpress-in-2021-date-de-test
KA : https://www.hebergementwebs.com/ვებსაიტი/-30-ყველაზე-სწრაფი-wordpress-თემები-2021-ის-ტესტის-მონაცემებში
IG : https://www.hebergementwebs.com/weebụsaịtị/30-ngwa-ngwa-ederede-gburugburu-na-2021-ule-data
MS : https://www.hebergementwebs.com/laman-web/data-30-terpantas-wordpress-tema-dalam-2021-ujian-data
KN : https://www.hebergementwebs.com/ಜಾಲತಾಣ/-2021-ಟೆಸ್ಟ್-ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ-30-ವೇಗದ-ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್-ಥೀಮ್ಗಳು
SD : https://www.hebergementwebs.com/ويب-سائيٽ/-30-تيز-ترين-ورڈپریس-موضوعات-2021-ٽيسٽ-ڊيٽا
IS : https://www.hebergementwebs.com/vefsíðu/30-festa-wordpress-þemu-i-2021-prof-gogn
NY : https://www.hebergementwebs.com/tsamba-la-webusayiti/30-othamanga-wordpress-themes-in-2021-test-data
RW : https://www.hebergementwebs.com/urubuga/-30-yihuta-ijambo-press-insanganyamatsiko-muri-2021-igerageza-amakuru
LT : https://www.hebergementwebs.com/interneto-svetainė/30-greiciausiu-„wordpress-themes-2021-test“-duomenu
PA : https://www.hebergementwebs.com/ਵੈਬਸਾਈਟ/-2021-ਟੈਸਟ-ਡਾਟਾ-ਵਿਚ-30-ਤੇਜ਼-ਵਰਡਪਰੈਸ-ਥੀਮ
MY : https://www.hebergementwebs.com/ဝဘ်ဆိုက်/the-30-fastest-wordpress-themes-in-2021-test-data
SI : https://www.hebergementwebs.com/වෙබ්-අඩවිය/2021-පරීක්ෂණ-දත්ත-30-වේගවත්ම-වර්ඩ්ප්‍රෙස්-තේමාවන්
MR : https://www.hebergementwebs.com/संकेतस्थळ/-2021-चाचणी-डेटा-30-वेगवान-wordpress-थीम-थीम
OR : https://www.hebergementwebs.com/ୱେବସାଇଟ୍-|/-30-ଦ୍ରୁତତମ-ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍-ଥିମ୍ସ-2021-ପରୀକ୍ଷା-ତଥ୍ୟ-|
PS : https://www.hebergementwebs.com/ویب-پاه/د-3021-ګړندی-ورډپریس-موضوعات-په-2021-ټیسټ-ډیټا
ML : https://www.hebergementwebs.com/വെബ്സൈറ്റ്/2021-ടെസ്റ്റ്-ഡാറ്റയിലെ-30-വേഗതയേറിയ-വേർഡ്പ്രസ്സ്-തീമുകൾ
KO : https://www.hebergementwebs.com/웹-사이트/2021-년-테스트-데이터에서-가장-빠른-워드-프레스-테마-30-개
JA : https://www.hebergementwebs.com/ウェブサイト/the-30-fastest-wordpress-themes-in-2021-test-data
MN : https://www.hebergementwebs.com/вэбсайт/2021-оны-хамгийн-хурдан-wordpress-сэдвүүд-30,-тестийн-өгөгдөл
KY : https://www.hebergementwebs.com/веб-сайт/2021-жылы-тез-wordpress-темалары-30,-тест-маалыматтар
KK : https://www.hebergementwebs.com/веб-сайт/-2121-тест-мәліметтер-30-жылдам-wordpress-тақырыптары
VI : https://www.hebergementwebs.com/trang-mạng/-30-nhanh-nhất-wordpress-themes-in-2021-test-data
TH : https://www.hebergementwebs.com/เว็บไซต์/30-เร็วที่สุด-wordpress-themes-ในปี-2021-test-data
YO : https://www.hebergementwebs.com/aaye-ayelujara/awọn-30-sare-wordpress-awọn-akori-in-2021-data-idanwo
TR : https://www.hebergementwebs.com/İnternet-sitesi/2021-deki-en-hizli-30-wordpress-temalari-test-verileri
XH : https://www.hebergementwebs.com/iwebhusayithi/i-30-ekhawulezayo-i-wordpress-imixholo-kwi-2021-idatha-yovavanyo
SL : https://www.hebergementwebs.com/spletna-stran/30-najhitreje-wordpress-teme-v-2021-testnih-podatkih
SV : https://www.hebergementwebs.com/hemsida/de-30-snabbaste-wordpress-teman-i-2021-testdata
ST : https://www.hebergementwebs.com/webosaete/data-test-30-e-potlakileng-ka-ho-fetesisa-li-theme-in-2021
SQ : https://www.hebergementwebs.com/faqe-në-internet/-te-30-temat-me-te-shpejta-te-wordpress-it-ne-2021-test-i
ZU : https://www.hebergementwebs.com/iwebhusayithi/i-30-esheshayo-i-wordpress-themes-in-2021-test-data
SO : https://www.hebergementwebs.com/bogga/the-30-ugu-dhaqsaha-badan-wordpress-mawduucyada-2021-imtixaanka-xogta
SW : https://www.hebergementwebs.com/tovuti/data-ya-kasi-30-ya-neno-haraka-katika-2021-data-ya-mtihani
ZH : https://www.hebergementwebs.com/网站/2021年最快的wordpress主题测试数据
UG : https://www.hebergementwebs.com/توربېكەت/2021-يىلدىكى-سىناق-سانلىق-مەلۇماتلىرى-ئەڭ-تېز-بولغان-30-wordpress-ئۇسلۇبلىرى
YI : https://www.hebergementwebs.com/וועבזייטל/די-30-פאַסטאַסט-וואָרדפּרעסס-טעמעס-אין-2021-פּרובירן-דאַטן
ZH-TW : https://www.hebergementwebs.com/網站/2021年最快的wordpress主題測試數據
TT : https://www.hebergementwebs.com/сайты/2021-тест-мәгълүматлар-30-иң-тиз-wordpress-темалар
TA : https://www.hebergementwebs.com/இணையதளம்/2021-சோதனை-தரவுகளில்-30-வேகமான-வேர்ட்பிரஸ்-தீம்கள்
UR : https://www.hebergementwebs.com/ویب-سائٹ/2021-ٹیسٹ-ڈیٹا-میں-30-تیز-ترین-ورڈپریس-تھیمز
UK : https://www.hebergementwebs.com/веб-сайт/30-найшвидших-wordpress-тем-у-2021-тестових-даних
TE : https://www.hebergementwebs.com/వెబ్‌సైట్/-2021-టెస్ట్-డేటాలో-30-వేగవంతమైన-wordpress-థీమ్స్
TK : https://www.hebergementwebs.com/web-sahypasy/2021-synag-maglumatlary-30-in-calt-soz-soz-temalar
TG : https://www.hebergementwebs.com/вебсайт/-30-зудтарин-мавзӯъҳои-wordpress-дар-2021-маълумот-озмоиш
UZ : https://www.hebergementwebs.com/veb-sayt/2021-yilda-test-ma-lumotlarning-eng-tezkor-wordpress-temalari-30
Peji yekumhanyisa peji yave chinzvimbo cheGoogle kubvira 2010 pakombuta kubva pakombuta uye 2018 yefoni . Iyo zvakare inokanganisa iyo nguva vashandisi yavanoshandisa pane yako saiti, kwavo kutendeuka, uye kwavo kuona kweako mhando.
Muchidimbu, kumhanya kwewebhu webhusaiti yako kune zvakakomba pane yako yekutsvaga injini chinzvimbo uye chiitiko chevashanyi.
Kuti uwedzere nguva yako yekurodha, unofanirwa kusarudza yako WordPress theme . Musoro wenyaya wakakodzera uchave wakatemerwa kune epamusoro matanho, akareruka, uye SEO inoshamwaridzika.
Kukubatsira iwe kuita iyo sarudzo, isu takamisikidza mamwe anomhanyisa kurodha WordPress madingindira anowanikwa muWordPress dhairekitori uye wechitatu-bato misika.
Tisati tanyura mune ino muunganidzwa, ngationgororei:
madingindira anozivikanwa kutsanya .
Webhusaiti inofanirwa kutakura nekukurumidza zvakadii?
Zvinoenderana neongororo nePortent , yakaringana nguva yekuremerwa yekutendeuka iri pakati pe0 ne4 masekondi.
Asi sekutonga kwese, webhusaiti inofanirwa kurodha nekukurumidza sezvazvinogona. Iyo chaiyo nguva inosiyana zvichienderana nerudzi rwewebsite, yayo bhizinesi niche, uye ayo maKPIs.
Kune zvakawanda zvinhu zvinokanganisa nguva yekuremerwa yewebhusaiti. Izvi zvinosanganisira:
Mangani mifananidzo, mavhidhiyo uye mamwe midhiya mafaera ari papeji
Saizi yemifananidzo iyo, mavhidhiyo uye mamwe mafaera multimedia
Encoding yako saiti uye padivi pe server s
Kana iwe uri kushandisa Service CDN
Ndeapi mapulagi akaiswa pane yako saiti
Wh pane dingindira rakaiswa pane yako saiti
Kuti tinzwisise ichi chekupedzisira chinhu, ngatione chinoita kuti WordPress theme ikurumidze.
Chii Chinoita Iyo WordPress theme Inokurumidza?
Pane nzira dzinoverengeka dzekukwirisa dingindira reIpiki nekukurumidza. Ngatitarisei zvimwe zvezvinhu zviri pazasi.
Mazhinji madingindira ane dhizaini dhizaini, izvo zvakakosha pakuendesa nharembozha yekuziva. Sezvo dhizaini inoteerera zvine simba ichitakura yako webhusaiti zvichienderana nesaizi yemuenzi, haudi imwe vhezheni yeyako saiti mbozha. Izvi zvinoreva kuti chinokambaira cheGoogle chinongoda kukamba saiti yako kamwe chete. Kana iwe uine imwe vhezheni vhezheni yesaiti yako saiti, yako ese mawebhusaiti zvinhu zvinofanirwa kuve zvakapetwa kune mbozhanhare vhezheni - iyo inogona kuwedzera maererano nebandwidth uye kugadzirisa.
Sezvo ichingoda chete seti imwe yekodhi, iyo yekuendesa dhizaini iri yakakurudzirwa dhizaini template neGoogle .
Themes izvo zvizere nemhando yepamusoro mifananidzo uye mhedzisiro inogona kurema. Yakakwira-mhando mifananidzo kazhinji inoreva hombe faira saizi, uye mifananidzo uye mhedzisiro inogona kuda yakawanda kodhi, ichidzikisira pasi peji rako kuita.
Misoro yakapfava ine chete anonyanya kukosha maficha achareruka uye zvinobatsira kuona kuti yako saiti inotakura nekukurumidza. Iwe unogona kugara uchiwedzera zvimwe zvekugadzira zvinhu uye mhedzisiro gare gare uchishandisa plugins kana tsika CSS.
Aya s anogona kutakurwa munzira mbiri: zvinowirirana kana zvinowirirana. Synchronous zvinoreva kuti mafaera anotakura rimwe nerimwe, nenzira yavanowoneka pawebhu peji. Saka kana bhurawuza ikasangana neimwe, inomira kurodha zvimwe zvinhu pane peji kusvikira yazara zvizere.
Hrone kurodha, kune rumwe rutivi, inobvumira akawanda mafaera kutakurwa panguva imwe chete, izvo zvinogona kukurumidza kuita kwewebhu peji.
Mamwe madingindira akagadzirirwa kurodha zvinogara, kana kunonoka kurodha aya s kusvika pazvinodiwa. Aya madingindira achakurumidza kupfuura ayo anoshandisa synchronous kurodha nekutadza.
Kumanikidza inzira yekudzora saizi yefaira kuti ikurumidze kuendesa mafaira kune mabhurawuza kubva kumaseva. Iyo dhata diki yekutumira, iyo inokurumidza iyo peji mitoro mune yako browser.
GZIP ndiyo inonyanya kufarirwa nzira yekumanikidza nhasi nekuti inogona kudzikisira huwandu hwe data kusvika 70% - uye munguva shoma uye kushandisa mashoma zviwanikwa kupfuura dzimwe nzira.
Matimu anomanikidza zvinhu neGZIP anowanzo kukurumidza kupfuura madingindira asingaite.
Unogona kudzidza zvakawanda nezve iyi nzira yekumanikidza mu Maitiro ekugonesa GZIP kumanikidza kwemapeji ewebhu anokurumidza .
Yakaderedza zvikumbiro zveHTTP
Chikumbiro chega chega cheHTTP - chemifananidzo, machira emhando, s, uye mafonti - zvinowedzera iyo yakazara mutoro nguva yesaiti yako. Sezvo yako saiti inokura, izvi zvikumbiro zveHTTP zvinotanga kuwedzera uye pakupedzisira zvinogadzira kunonoka kunooneka pakati pezvinodzvanywa nemushandisi uye pavanorodha.
Ese nhamba yemafaira akakumbirwa uye saizi Mafaera akaendeswa anogona kukanganisa temps kurodha peji.
Matimu ane mashoma mafaira uye akareruka huremu anoita mashoma HTTP zvikumbiro uye nekudaro anotakura nekukurumidza. Nzira yakanakisa yekuona huwandu hwezvikumbiro zveHTTP zvinoitwa netemusoro kuimhanyisa kuburikidza neyokukurumidza test turu. Tichakurukura mashandisiro avo pazasi.
Maitiro ekutarisa kumhanyisa kumhanyisa kwemusoro wangu weWordPress theme
Pane akati wandei maturusi epamhepo aunogona kushandisa kutarisa kumhanyisa kumhanyisa kwako WordPress theme. Zvimwe zvezvinyanyozivikanwa ndezve WebPageTest , GTmetrix uye Pingdom . Iwe unofanirwa kuyedza uchishandisa musanganiswa wezvishandiso sezvavanoedza zvinhu zvakasiyana uye vane maseva akasiyana, izvo zvinogona kukanganisa mhedzisiro.
Maturusi aya anoongorora zviri mukati mewebhu peji uye nekugadzira mhedzisiro yekuita uye mazano ekuti iro peji rikurumidze. Yakagovaniswa mhedzisiro yekuita inosiyana nechishandiso, asi mazhinji anosanganisira iyo nguva yekuremerwa, saizi peji, uye nhamba yezvikumbiro zve server zvinoda kurodha zvirimo papeji
Kana iwe uchinge watove neWebhusaiti webhusaiti ine inoshanda theme yakaiswa, unogona kungoisa yako saiti URL mune yekumhanyisa bvunzo chishandiso. Kana iwe usina saiti uye uchiri kutsvaga madingindira, unogona kuyedza kumhanya kwedemo vhezheni yetimu.
Ngatipfuurei nenzira yekutarisa yako WordPress theme yekumhanyisa mhanyisa uchishandisa WebPageTest. Matanho acho anenge akada kufanana kana iwe ukashandisa GTmetrix kana Pingdom pachinzvimbo.
Nhanho 1: Pinda URL yewebhusaiti iwe yaunoda kuyedza.
Sarudza iyo padyo bvunzo nzvimbo inotsigira chishandiso uye / kana bhurawuza rauri kuyedza.
Sarudza bhurawuza rauri kuyedza.
Nhanho yechina: Dzvanya pa Kutanga bvunzo .
Mirira kuti muyedzo wekuita upedze.
Ratidza zvawanikwa. Chengetedza zvakanyanya kune iyo "Yakazara Yakatakurwa" manhamba. Izvi zvinokuudza kuti mangani masekondi zvakatora kurodha zvakazara peji uye mangani zvikumbiro zvemumwe zvakaitwa kurodha peji.
Unogona kutarisa paWebPageTest 's
zvinyorwa kune rumwe ruzivo pane avo metric uye bvunzo.
Uchitsanya Kukanda WordPress Themes
Madingindira anotsanangurwa pazasi anogona kukubatsira iwe kugadzira
WordPress Webhusaiti , chero rako rehunyanzvi kumashure, bhajeti rako kana bhizinesi rako. zvinangwa.
Usati wanyatsoongorora mune imwe neimwe yemisoro iripazasi, usadaroZiva kuti kurodha nguva yedata inosanganisirwa muchikamu chimwe nechimwe. Iyi data yakaunganidzwa nekumhanyisa iyo demo saiti yemusoro wenyaya wega kuburikidza neWebPageTest,
GTmetrix uye zvishandiso zvePingdom. Maitiro akanyorwa ndiwo mhedzisiro izere yeichi chishandiso. Zvikumbiro zveHTTP zvakanyorwawo o pamusoro wenyaya yega yega. Izvi zvakayerwa neGTmetrix.
Yakazara peji rewebhu kutakura nguva: 1.330 masekondi Nguva yekuremerwa yeGTmetrix:
Pingom kurodha nguva:
SociallyViral inyaya yemagazini-dhizaini yakanyatsogadzirirwa vashandisi vanoda ku gadzira saiti yemukati yehutachiona paWordPress . Saka kana iwe uine zvakawanda zvekuita zvemukati uye uchida inoratidzika, yakarongeka dhizaini iyo inokwezva kune avateereri vazhinji, saka uyu ndiwo dingindira rako.
Kunze kwekukwezva hutachiona hwehutachiona, SociallyViral inokurumidza zvinoshamisa kurodha kuitira kuti zvemukati zvive nemukana uri nani wekumisikidza muinjini dzekutsvaga. Ipo iine hukuru hwakakura saizi peji kupfuura mazhinji ematimu ari pane ino runyorwa, inoviga yakawanda yezvinyorwa kuseri kweRorodha Zvimwe bhatani. Sezvo mabhatani emitoro achida zvishoma zvemukati kuti zvionekwe pamberi pamushandisi, iyo peji rewebhu inogadzirwa nekukurumidza zvakanyanya kupfuura kana iwe ukashandisa risingaperi ll scro kana pagination. 2.
Yakazara peji rewebhu kutakura nguva: 1,435 masekondi
Nguva yekuremerwa yeGTmetrix: 658ms
Pingom kurodha nguva: 407ms
zvikumbiro zveHTTP: 14
GeneratePress ndeye WordPress theme yakavakwanekumhanyisa uye neruzivo rwevashandisi sezvakanyanya kukoshesa. Iyo ine zvese zvemahara uye zveprimiyamu vhezheni, iyo iwe yaunogona kuona pane saiti saiti peji pamusoro.
, kusanganisira WooCommerce. Izvo zvakare zvinoshamisa mwenje. Muchokwadi, kumisikidza kuseta neiyi tema iri pasi pe30KB Uye inobatana mushe nemamwe maturusi mune yako tech stack.
3. 5.7 masekondi
Pingom kurodha nguva: 472ms
zvikumbiro zveHTTP: 38
Iyo inouya neyakagadzika inoteerera dhizaini iyo ichaita kuti yako saiti iratidzike yakakura kunyangwe pazvidiki zvidiki screen izvo Pakati pezvakanakisa maficha zvine hukama mbichana widget, icon mafonti kunze kwebhokisi, google mafonti, social media kusangana, nezvimwe.
Pamusoro pane yakasarudzika Schema demo iyo inoratidza yakawanda yezvinhu zvataurwa.
Yakazara peji rewebhu kutakura nguva: 1.537 masekondi GTmetrix kurodha:
35Iyo Parallax Pro chifananidzo
yakanaka seti yematemplate akanyatsogadzirirwa fomu yeGenesis.
Seizvo zita rinoratidzira, Parallax Pro inouya neakakura parallax maitiro ekuwedzera kudzika kune webhusaiti yako. Iyo Parallax Pro
Peji yeWebhu inotakura nguva:
Peji rewebhu kutakura nguva: > 1,699 masekondi
GTmetrix: 1.5 masekondi
Pingom kurodha nguva: 1.27 masekondi
Zvikumbiro zveHTTP: 48
Webhu reWebhuTest Yakazara nguva yekutakura: 1,810 masekondi
GTmetrix mutoro nguva: 1,3 masekondi
Pingom kurodha nguva: 748ms
Yakagadzirirwa ese maviri mainjini ekutsvaga uye vashambadziri, Zvakanakisa zvine yakachena, inoteerera uye inonaya codebase dhizaini inoshanda zvakakwana neGoogle AdSense. Iyo zvakare inosanganisira AJAX kurodha, SEO inoshamwaridzika yakapfuma snippets, uye retina akagadzirira mifananidzo, pakati pezvimwe zvakakosha zvinhu.
Kukubatsira iwe kugadzirisa kutaridzika kwesaiti yako, Zvakanakisisa zvinopa risingagumi mavara, kumashure uye mabara epadivi, Google Fonti.
Pingom kurodha nguva: 513ms
Mufananidzo sosi Zvakafanana uNewbie blogger inogona kugadzira chaiyo yakasarudzika webhusaiti uchishandisa MagXp WordPress theme.
Inosanganisira anopfuura gumi akagadzirira-akagadzirwa epamba mapepa dhizaini uye dhonza uye udonhedze anovaka peji kuti iwe ugone kuvaka webhusaiti pasina nguva. Inopawo sarudzo dzemhando dzisingagumi, sarudzo dzeparutivi, zvingasarudzika marongero, anopfuura mazana matanhatu nemakumi matatu emafonti eGoogle uye zvimwe zvakawanda.
Peji peji inotakura nguva:
Nguva de GTmetrix kurodha:
Pingom kurodha nguva: 837ms
uye logo, vhura kana kuvhara zvimedu zvechingwa uye sarudza kubva pane yakasarudzika sarudzo yepadivi. Kune zvimwe zvakatowanda maficha anowanikwa neWhitee Pro.
9. Genesisi Sisitimu Pasuru
Nguva yekuremerwarizere peji rewebhu:
GTmetrix kurodha nguva: 1.2 masekondi
Pingom kurodha nguva: 567ms
HTTP zvikumbiro: 37
Mifananidzo sosi Genesisi ndeimwe yemaforamu eMazhinji anoshandiswa madingindira eWordPress nevaridzi vebhizimusi uye mabloggi. Kana iwe uri kutsvaga kuvaka nekukurumidza, SEO-yakagadziridzwa theme yemwana pane yakachengeteka fomati, ipa ino fomati kuyedza. Kana iwe unogona kushandisa imwe yezvakawanda zve Vana Genesis yemahara
Genesisi inotakura nekukurumidza nekuda kwekukura kwayo peji saizi, asi inogona kuve yakagadziriswa nani kuti ikurumidze kuita mashoma kukumbira kweHTTP. Kumanikidza GZIP kunogona kubatsirawo. 10. Divi Dingindira
Peji peji rekutakura nguva > 1.9 masekondi Pa>Nguva Yekutakura:
Divi ndomumwe weanozivikanwa uye akashandisa madingindira eWordPress. Ichizivikanwa neyakaomarara uye inoratidza-yakapfuma dhizaini, iyo Dhi theme inouya neyayo peji muvaki. Iyi yekumberi-kumagumo jenareta ine simba rakanyanya uye inopa akati wandei mamamojuru ayo anogona kushandiswa kugadzirisa yako saiti pasina kukodha. Kunyangwe paine huwandu hwakasimba hwezvinhu uye sarudzo dzekugadzira, Divi anochengeta zviri nyore uye nekukurumidza kurodha nguva.
Zakara Yakazara peji rewebhu kutakura nguva:
Nguva yekuremerwa yeGTmetrix: 1.2 masekondi
Pingom Load Nguva: 716ms
Zakrainokurumidza kurodha WordPress theme iyo inogona kushandiswa kuvaka chero mhando yewebhusaiti - pane chero mhando bhajeti. SaGeneratePress, Zakra inopa yemahara uye yepamberi vhezheni. Yakavakirwa padanho risingaremi zvichitevera zviyero zvekodhi zvinotsanangurwa ne
Izvo zvinouyawo neanopfuura makumi matanhatu neshanu akafanogadzirirwa mademo ezveruzhinji rwezvimedu zvinosanganisira blogging, bhizinesi, ecommerce, uye zvisina purofiti. 12. Log
Yakazara peji rewebhu kutakura nguva:
2,610 masekondi GTmetrix Mutoro Nguva:
zvikumbiro zveHTTP: 36
Mufananidzo Sosi uye kumhanya.
Iyi theme ine 90 yakagadzirira-kushandisa mademo aunogona kuendesa nekungodzvanya kamwe chete. Iyo yakavakirwa-mukati tagDiv Composer, header builder, footer maneja, uye epamberi theme theme mapaneru ane anopfuura chiuru dhizaini zvinhu zvinokutendera iwe gadzirisa zvese zviri pane yako saiti mumaminetsi.
Yakazara dandemutande peji rekutakura nguva GTmetrix Load Nguva:Pingom kurodha nguva: 747ms
zvikumbiro zveHTTP: 51
Zvemagariro izvozvi zvinouya nemashoma-e-mubhokisi mademo aunogona kuendesa nekungodzvanya kamwe chete. Iyo zvakare inopa matatu akasiyana akasiyana ekutsvedza anotsvedza sarudzo, yemunyori nhoroondo, inoenderana posvo sarudzo, hurukuro hurukuro, uye maviri makuru marongero. , sarudzo dzisingagumiuye neshure, google mafonti, icon mafonti, akatsetseka anoteerera dhizaini, off-canvas nhare mbozha, mega menyu kuenderana, uye parallax yekutsikisa ficha. 14.
Pingom kurodha nguva: 1.27 masekondi zvikumbiro zveHTTP:
SEOWP inouya nemakumi matatu nematatu matemplate uye akasimba huwandu hwesarudzo dzekugadzira, kusanganisira misoro yemusororisingagumi, chinhu chakapfuma mega menyu, yepamusoro nzira dzekugovana pasocial, dhonza-uye-kudonhedza tsoka tsoka jenareta uye anopfuura makumi mapfumbamwe emakumi mapfumbamwe emifananidzo. Pamusoro peaya maturusi ekugadzira uye maficha, kune zvakare Zvinofungidzirwa Fomu Inovaka kukurumidza kuwedzera fungidziro mafomu kune yako saiti pamwe nemaponi, mitengo yemitengo, nezvimwe.
Mesmerize inopa iyo premium vhezheni uye yakasarudzika yemahara vhezheni.
Pingom Load Nguva:
Rakareruka ndeimwe ye yakanakisa yemahara minimalist WordPress madingindira
- uye iyo theme inotengesa zvakanyanya kubva kuNimbus Themes.
Yapedza kurodha nguva yewebhu peji:
Kutora nguva GTmetrix:
Pingom kurodha nguva: 578ms
zvikumbiro zveHTTP: 24
Uchawanawo kugadzirira-kushandisa dhizaini dhizaini uye iyo
Inooneka Composer premium dhonza-uye-inodonha plugin. Tarisa uoneiyo Brando yechiitiko demo pamusoro. 18.
Pingom kurodha nguva: 1.23 masekondi
HTTP inokumbira: > Mufananidzo sosi
Yosemite ndeimwe yekukurumidza kurodha WordPress madingindira akagadzirwa neMyThemeShop. Yayo yakachena, minimalist dhizaini inoita kuti Yosemite ive yakakwana kune chero yega blog.
Kunyangwe iri minimalist, Yosemite inopa matani ezvazvino maficha senge chero dingindira muMyThemeShop. Iwe unowana risingagumi marara uye kumashure sarudzo, ine simba tema sarudzo mapaneru, akati wandei anobatsira mapfupi, akavakirwa-munharaunda masocial network, kushambadzira kuiswa kwakakwidziridzwa kweAdSense, kupuruzira maficha kubva parallax, Go mafonti.ogle, nezvimwe. Kutakura nekukurumidza, Yosemite anoshandisa GZIP kumanikidza uye anodzivirira URL kutungamira, iyo inotumira mabhurawuza kune imwe nzvimbo uye kunonoka kurodha. Asi saizi yayo yese saizi yakakura uye inoita yakawanda yezvikumbiro zveHTTP, izvo zvinononoka kudzikisira mashandiro epeji. 19.
Pingom kurodha nguva: 1.08 masekondi
HireBee yakanakira kuvaka musika webasa rakazvimirira seUpwork neFiverr.
Iyi Yekukurumidza WordPress theme inovakwa pamusoro peanoteerera Nheyo fomati. Iyo haina kureruka uye inoita mashoma ekukumbira kweHTTP, asi inogona kukurumidza kana ikashandisa kudzvinyirira kweGZIP uye ikadzivirirwa kuidzokorora.URL ections.
Nemusoro wenyaya uyu, unogona kuita mari saiti zviri nyore nekuchaja vashandisi vako kuitisa kweprojekiti. Iwe zvakare unowana yekumberi-kumagumo eprojekti zvinyorwa, zvekuzvimiririra zvinyorwa, mushandisi chimiro dashibhodhi, chat interface, uye nezvimwe.
GTmetrix mutoro Nguva: 2.8 masekondi
Pingom kurodha nguva: 1.38 masekondi
zvikumbiro zveHTTP: 34
Bhuni ndeye inoyevedza WordPress theme ine dhizaini yakanaka kune ezines uye nezvimwe zvemukati zvakapfuma nzvimbo.
Bimber com es ine makumi maviri akagadzirira-akagadzirwa madhemos kusarudza kubva. Ese aya matemplate akakosha ekugadzirisa yakawanda yezvinyorwa uye kukwezva vashanyi. Sezvo dingindira iri richiuya neVisual Composer plugin, iwe unogona kukurumidza kugadzira tsika dhizaini yeyako saiti pasina chero coding.
MoneyFlow yakakosha kune vanoblogi vanotsvagant mari kubva kumablog. Iyo yakanaka uye yakazara inogadziriswa theme, MoneyFlow inopa yakatarwa zvinyorwa chikamu uye mulse akati wandei epamba peji dhizaini iwe aunogona kumisikidza ipapo ipapo. Nemusoro weMoneyFlow, unogona kugonesa kana kudzima chinotsvedza mumusoro wepasarudzo yesarudzo uye shandisa iyo parallax yekutsikisa ficha kuchengetedza vashandisi kubatikana nezvako zvemukati. Iwe zvakare unowana off-canvas nharembozha menyu, risingaperi mafonti mafonti, Google mafonti, uye marangi kumashure pamwe nesidebar sarudzo. Kana uchinge wagutsikana nedhizaini, unogona kuita mari yako blog nezvishambadziro uye nechitoro chepamhepo uchishandisa AdSense uye WooCommerce.
22. 4.0 masekonzi
P kurodha nguvaingom:
1.00 masekondi zvikumbiro zveHTTP: 66
Izvi ndizvo Zvakakosha kumablog mabhegi nekukurumidza, sezvo achizonatsiridza mikana yako yekumisikidza mukutsvaga uye upe vashanyi vako chiitiko chisina musono. Kana iwe uchitsvaga rakakura SEO rakagadziriswa dhizaini yako blog, ipa MyBlog kuyedza.
Iyo MyBlog theme inouya neasere dhizaini dhizaini dhizaini, yakavakirwa-munharaunda kugovana sarudzo, inosanganisirwa posvo sarudzo, yakanaka ficha positi inotsvedza, munyori bio bhokisi uye chikamu chemashoko. Iyo zvakare ine-tinya-demo yekumisikidza uye-imwe-tinza yekuvandudza sarudzo yekuchengetedza iwe nguva. 23. >> 2,3 secondes
Pingom kurodha nguva: 1.36 masekonzi
zvikumbiro zveHTTP: 54
Image Chitubu Chemufananidzo
Avada inouya ine simba rekudhonza uye inodonhedza inovaka webhusaiti iyo inobvumidza iwe kuvaka saiti yakazara yakagadzirirwa pasina kunyora chero kodhi.
Iyo Avada theme inouyawo nenhamba dzinoverengeka dzakagadzirwa-dhizaini, risingagumi ruvara uye dhizaini sarudzo, uye yakavakirwa-mukati mega menyu sarudzo iyo iwe yaunogona kugadzirisa nekushandisa ine simba theme theme pani. Avada inouyawo nenhamba dzemahara dzemahara plugins dzaunogona kushandisa kupfuurira kuita yako saiti
WebpageTest Load nguvazvizere zvizere:
3 .946 masekondi GTmetrix kurodha nguva:
1.29 masekondi zvikumbiro zveHTTP: 80
Neve inyaya inokurumidza uye isina kurema tema yakagadzirirwa nevavaki weChinyorwa. Ipo kusasarudzika kweWordPress kuri pasi pe28KB uye kutakura mune isingasviki sekondi, webhusaiti yakaoma zvikuru ine Neve-yakavakirwa mifananidzo, zvinyorwa, uye mhedzisiro mhedzisiro zvicharamba zvichishanda nekukurumidza.
Pingom Kutakura Nguva: 660ms
HTTP zvikumbiro: 60
Mufananidzo sosi SocialMe iri yakajeka uye yemazuva ano theme, yakanaka yekugadzira yakagovaniswa zvemukatieable yevezvenhau.
SocialMe inouya nemana demo dhizaini sarudzo dzaunogona kuendesa nekungodzvanya kamwe chete. Nedingindira iri, iwe unokwanisa kuwana gumi nematanhatu sarudzo dzewijeti, bhokisi remunyori, sarudzo dzisingagumi dzemavara, sarudzo dzekumashure, mafonti egoogle, kushamwaridzana kwemasocial media, off-canvas mobile menyu, parallax yekutsvagisa maitiro uye yakavakirwa-mukati kushambadzira manejimendi sarudzo.
26. 2.7 masekondi
Kana iwe uchitsvaga ine simba uye inochinjika WordPress theme inotakura nekukurumidza, TheGem isarudzo huru. ndeimwe yeakanakisa anotengesa akawanda emawadhi epaWordPress madhizaina izvo zvishomainogona kushandiswa kugadzira chero mhando saiti.
Nedingindira iri unokwanisa kuwana anopfuura mazana mana matemplate ekugadzira. Iwe unogona kusarudza chero eaya ma templates uye unyore nekungodzvanya kamwe chete. Kuti uzvigadzirise, iwe unowana yakavakirwa-muVisual Composer plugin, anopfuura zana nemakumi mashanu emazuva ano sarudzo dhizaini, uye anopfuura mazana maviri nemakumi mashanu ematanhatu ekushongedza zvinhu. Izvi zvinoreva kuti haufanire kukodha kuti ugadzire yakasarudzika saiti. Iyi inonyatsoteerera uye dhijitari rakagadzirira WordPress theme iyo ichaita kuti yako saiti iratidzike zvakanaka zvisinei kuti unoiona kupi. Dingindira rinotakura nekukurumidza uye rakagadzirwa nechena, SEO inoshamwaridzika kodhi kuitira kuti zvemukati zvive nemupendero pamusoro pemakwikwi ako. Inogona kukurumidza kana ikashandisa kudzvinyirira kweGZIP uye yaita mashoma kukumbira kweHTTP.
Pingom Kutakura Nguva:
Zvikumbiro zveHTTP: > Mufananidzo sosi
NeWordPress Coupon theme, unogona kugadzira nekugadzirisa inokurumidza kurodha coupon saiti iyo ichaunza mari. Coupon ndeye yakazara inoteerera theme iyo inopa dzinoverengeka demo dhizaini sarudzo dzaunosarudza kubva iwe kuti utange ipapo ipapo. Ipapo iwe unogona kuwedzera inotsvedza uye coupon carousels uye sarudza kubva pasingagumi mavara sarudzo, kumashure sarudzo, uye font sarudzo kuti utaure saiti yako.
WebpageTest Yakazara nguva yekuremerwa: 4.311 masekondis GTmetrix kurodha nguva:
Pingom Nguva Yekutakura:
Mufananidzo sosi NewsPaper inokurumidza kurodha WordPress theme iyo Inouya neiyo SEO inoshamwaridzika marongero uye ine simba theme tema pani kuti ikubatsire iwe kugadzirisa yako saiti nenzira chaiyo yaunoda iwe.
Pingom kurodha nguva: 1.03 masekondi
zvikumbiro zveHTTP: 101
Kana iwe uchitsvaga yakachena, minimalist dhizaini yemararamiro ako kana fashoni blog, Olsen yakanaka. Iyo inouya nemhando dzakasiyana dzekumusoro peji kurongedza sarudzo, yakasarudzika blog dhizaini, uye grid-yakavakirwa dhizaini, yakakwana pakuronga zvemukati uye mifananidzo. Iyi theme ndeye SEO inoshamwaridzika, inoteerera zvizere, uye inouya neyemukati demo yaunogona kuisa nekungodzvanya kamwe chete. Kamwe yaiswa, Olsen ichawedzera pamusoro makumi masere maitiro ekugadzirisa kune iyo WordPress Customizernekutadza.
30. MH Magazini
WebTest Fu peji Kurodha nguva lly: :
2.6 masekondi Pingom Load Nguva: 1.33 masekondi
zvikumbiro zveHTTP :
Kunze kwekugadzirwa, mashandiro, mutengo, uye template kusarudzwa, nguva yekuremedza chinhu chakakosha chekutarisa kana uchisarudza theme yeWordPress . Kuita kuti sarudzo isunungukire iwe, takapfupisa zviyero zvekukurumidza kurodha WordPress madingindira mutafura iripazasi.
1,5 s 1 .27s 48
1,810s 1 , 3s 748ms 53
MagXP 1,834s 1 , 1s
1 , 1 s
2.a> 2.610 s
1 , 3s 657ms 36 SocialNow 2.638s 1 , 6s 747ms 51
SEO WP 2,984s 4,2 s 1,27s 93
Mesmerize 3,060s 5,5s 903ms 49
Rakareruka 3.334s 2.1 s 630ms 54
HireBee 3,555s 1,8s 1.08s 40
Bhuni 3,564s 2,8s 1,38s 34
MoneyFlow 3,618s 1,1s 599ms 59
MyBlog 3.781s 4.0s 1.00s
Avada 3.865s 2.3s 1.36s
54 Neve 3,964s 3,2s
80 SocialMe 3.994s 4.5 s
60 TheGem 4.010s 2.7s
99 Coupon 4.307s 1.0s
479ms 44 NewsPaper 4,311s 2.0s
849ms 64 Olsen 5.787 s 7.1s
1.03s 101 MH Magazini 6.876s
1.33s 70 Kusarudza Kurumidza Kuisa WordPress Musoro Iyo yekukurumidza kurodha WordPress theme inogona kukubatsira iwe kuvaka inokurumidza webhusaiti iyo inofadza vashanyi vako uye inovandudza yako chinzvimbo mikana. Nekutanga nekodhi yekodhi yakachena uye nekushandisa chete izvo zvinhu zvaunoda, iwe unozogadzirira iwe kuti ubudirire.
35 akanakisa emashoko madhijitari ebhizinesi diki 2021
2021-07-23 12:43:27 | Webhusaiti
Tinokuunzira muunganidzwa wemasimba emabhizimusi madiki ane simba kwazvo anoshanda kune chero indasitiri. Mabhizimusi madiki arikutora pasirese uye pasina webhusaiti ivo havaonekwe Munguva ino yekukurumidza kukura kwehupfumi nekuparara, mabhizimusi makuru, marefu akamira anonyangarika gore negore, a...
11 akanakisa mega menyu WordPress zvinyorwa 2021
2021-07-23 12:32:03 | Webhusaiti
Isu tinokuunzira iwe muunganidzwa weakanyanya kusimba uye ari nyore kushandisa mega-menyu WordPress madingindira eiyo assortment yezvakasiyana webhusaiti zvisikwa. . Kuregeredza nyaya yekushandurwa kwewebhusaiti uye kukwana, unoisa pangozi kurasikirwa nevatengi vatengi uye kudzikisa ni...
17 akanakisa bootstrap wordpress madingindira e2021
2021-07-23 12:24:10 | Webhusaiti
Iyo yakazara kuunganidzwa kweakanakisa eBootstrap WordPress madingindira akagadzirwa neye mobile yekutanga nzira uye yakagadzirirwa portfolio, bhizinesi, blog, yako pachako, e-commerce uye mamwe mawebhusaiti. kunyorera. Iyo ine HTML uye CSS dhizaini matemplate e typography, mafomu, mabhatani, kufamb...